Momba anay - Airpull (Shanghai) Filter Co., Ltd
VCS sy GHG
Sivana compressor an'habakabaka
Fitaovana aorian'ny fitsaboana ho an'ny rivotra voaporitra
Fanamainana rivotra mangatsiaka
Element sivana Air Compressor
Fikojakojana ny sivana an'habakabaka
Fifidianana sivana an'habakabaka
Fizotry ny fandidiana fanoloana ny Separator Air Oil
Fomba fanadiovana ny sivana menaka compressor rivotra
Fanoloana sy fikojakojana menaka compressor
Ahoana ny fisafidianana Sivana menaka
Fanondroana fampisehoana an'ny Air Compressor Air Filers
Ny fitandremana ny Air Compressor Air Oil Separator
Nanomboka tamin'ny taona 1996, ny sivana Airpull (Shanghai) dia efa matotra ho mpanamboatra sivana compressor rivotra. Amin'ny maha-orinasa sinoa avo lenta amin'ny vanim-potoana maoderina, ny orinasanay dia naneho fahaiza-manao matihanina amin'ny famolavolana, famokarana ary fizarana. Manolotra karazana fanoloana kojakoja fanoloana compressor an'habakabaka isan-karazany izahay ao anatin'izany ny singa avo lenta toy ny sivana rivotra, sivana solika, ary mpanasaraka solika. Ireo vokatra ireo dia natao manokana hifanaraka amin'ny marika fanta-daza toa ny Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Compair, Sullair ary Fusheng. Ho fanampin'ny sivana compressor rivotra, dia afaka mamokatra sivana menaka hydraulika sy sivana fiara ho an'ny mpanjifantsika ihany koa isika.
Ny sehatra fampandehanan-draharaha nohatsarainay dia misy rafitra fitantanana stratejika izay manome laharam-pahamehana ny fanavaozana, ny fanatontoloana ary ny fikarakarana mpanjifa. Ny modelin'ny orinasa momba ny fitantanana ny loharanon'olombelona dia natao hampiroborobo ny fitomboan'ny talenta tsirairay. Mamporisika ny fianarana tsy tapaka izahay miaraka amin'ny lesona sy seminera voalamina tsy tapaka. Ny mpiasa mahay dia nahazo fampianarana tsara momba ny fomba fanomezan-toky ny kalitao.
Amin'ny maha-mpisolovava ny fiarovana ny tontolo iainana sy antsoina hoe "Green Enterprise", dia nampiditra ny Airpull (Shanghai) Filter ho an'ny vokatra mitsitsy sy mitsitsy angovo izahay. Ny fitaovana sivana rehetra dia misy taratasy sivana vita amin'ny vera vita amin'ny fitaratra HV, nafarana avy any Etazonia sy Alemana. Ny substrate amerikana sy alemana dia mampitombo ny fahombiazan'ny fanivanana mba hampihenana ny fandaniana amin'ny asa ary hanitarana ny fiainana mety ho an'ny compressor rivotra. Ny fitaovam-pamokarana avo lenta sy ny teknikan'ny famokarana voadio dia nahafahan'ny famokarana 600 arivo isan-taona. Ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2008 dia mihatra.
Miaraka amin'i Shanghai ho fototry ny asantsika, dia manondrana maneran-tany any amin'ny faritra misy an'i Eoropa, Amerika Atsimo, Azia Atsimo-Atsinanana, Afovoany Atsinanana, sns. Ao an-trano, ny tambajotran'ny serivisy dia manome fandrakofana feno manerana ny firenena.
Tamin'ny 1996, nanomboka nanamboatra cartridges sivana ho an'ireo sivana fiara telo tena izy.
Tamin'ny taona 2002, nitarina ny sehatry ny fanasokajiana mba hampidirana sivana ho an'ny compressor rivotra visy.
Tamin'ny taona 2008 dia nisy orinasa vaovao naorina. Ny orinasanay dia nisoratra anarana tamin'ny anarana Airpull (Shanghai) Filter.
Tamin'ny 2010, nanangana birao tany amin'ny toerana stratejika toa an'i Chengdu, XI'an ary Baotou izahay.
Tamin'ny taona 2012, nampiharina ny rafitra fitantanana ny fahombiazan'ny BSC. Ity fampifanarahana ity dia mampiditra amin'ny fomba mahomby ny teknolojia vaovao avy amin'ny loharano ao an-toerana sy avy any ivelany ho ao anatin'ny repertoire.
Nanomboka tamin'ny 2012 ka hatramin'ny 2014, nitombo haingana ny tsenantsika eran-tany, ary nanatrika ny Hannover Messe any Alemaina sy ny PCVExpo any Rosia izahay.
Adiresy: 4F, ​​No.420 Huiyu Road, Jiading District, Shanghai, Shina
Telefaonina: +86 18601764963